NetBeans12.2 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Uku ndiko kuburitswa kwechinomwe kwakaburitswa neApache Foundation kubvira Oracle paakapa kodhi yeNetBeans.
1 NetBeans 12.2 Main Zvitsva Zvimiro
2 Maitiro ekuisa NetBeans 12.2 paLinux?
NetBeans 12.2 Main Zvitsva Zvimiro
Mune iyi vhezheni nyowani, rutsigiro rwakawedzerwa pamabasa matsva emitauro yeJava akaunzwa muJDK 14 uye JDK 15.
Saizvozvo, iyo kodhi inosimbisa mazwi akakosha "chisimbiso", "chisina kuvharwa" uye "mvumo"Uye zvakare, kupedzisa kodhi uye fomati zvakawedzerwa kune iyo "yakavharwa" mhando, pamwe nekumisikidza kwe "yakavharwa" uye "mvumo" matauriro.
Uyewo inowedzerwa rutsigiro rweiyo compact fomu yedudziro inosimbiswa makirasi akaitwa achishandisa iyo "rekodhi" kiyi kiyi. Yakagadziriswa autocomplete, kugadzirisa zvekare uye kodhi fomati nyaya ne "registry".
Java webhu yekuvandudza maturusi ane yakagadziridzwa rutsigiro rweChitubu 5.2.9 MVC chimiro. Mune dialog yekugadzirisa webhu dhizaini zvivakwa, URL yekuchengetedza ine hama mahukama akagadziridzwa. Kubatanidzwa kweDerby yakabviswa kubva kumaParaara Server ma module. Yakagadziriswa nyaya neJavaServer Faces Catalog.
Kune rimwe divi, iyo kunatsiridza rutsigiro rweMaven uye Gradle kuvaka masisitimu. Kutsanangura mafonti uye zvinyorwa muzvirongwa zveGradle zvakagadziridzwa. Yakagadziridzwa frontend chizvarwa. Yakagadziriswa tsaona muMaven mapurojekiti kana uchishandisa getModuleName.
Tsigiro ye Java 15 yakawedzerwa kuNetBeans 'yakavakirwa-mukati Java compiler nb-javac (yakagadziridzwa javac).
Kune mutauro weJava, kuratidzwa kwemhando kunopihwa nekufona nzira pamwe netambo.
Izvo zvinotaurwa zvakare kuti kugadzira nyowani makirasi, nzvimbo dzekubatanidza uye enum zvakapihwa pakunamatira mameseji kubva clipboard. Kune iyo VS Code mupepeti muNetBeans yakaona kuwedzerwa kune iyo kodhi mupepeti uye debugger muJava.
Iyo JavaFX yekutsigira kodhi yakawedzerwa kuti itsigire zvinhu zvisingachinjiki.
Wakawedzera rutsigiro rwemabasa matsva ePHP 8.
Iyo javac compiler inogumira kune imwechete chiitiko.
Tsigiro isingachashandi yeOracle JET yabviswa.
Yakagadziriswa CSS3 rutsigiro.
Yakawedzera plugin yeBootsFaces nerutsigiro rwekuvaka « ».
Yakavandudzwa vhezheni Ant 1.10.8, exec-maven-plugin 3.0.0, Gradle Tooling API 6.7, JDBC PostgreSQL 42.2.16, payara-micro-maven-plugin 1.3.0, Chitubu Chemukati 4.3.29, TestNG 6.14.3.
Kutsvaga kweJDKs kwakaiswa ne SDKMan uye Debian kwakapihwa.
Kumhanya kwega kwega uye kugadzirisa dambudziko kwakabvumirwa apo iyo Gradle chirongwa chinopa rakakodzera basa
Pakupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni vhezheni, iwe unogona kutarisa izvo zvinyorwa mune yekutanga posvo. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Maitiro ekuisa NetBeans 12.2 paLinux?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » NetBeans12.2 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Flatpak mapakeji achakurumidza kukwanisa kuiswa kubva kune yako chitoro nekuda kweGNOME Souk